I-Localist: Shicilela, Phatha futhi Wenyuse Imicimbi Yakho Ku-inthanethi | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 7, i-2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Abakhangisi basebenzisa imicimbi kunanini ngaphambili, futhi umthelela uyabonakala. Eqinisweni, abathengisi babeka ukuhweba nemicimbi njengecebo labo lesibili elisebenza kakhulu ngemuva kokuthi iwebhusayithi yenkampani Imicimbi isize ukuletha imikhondo emisha, iguqule amathemba anentshisekelo kumakhasimende, futhi ichaze kangcono umkhiqizo noma insizakalo ngesikhathi sangempela. Kodwa-ke, abathengisi abaningi balwela ukuqinisa kuphela imicimbi kumandla ahlanganisiwe, kepha futhi nokuqonda nokukala ukuthi bakushayela kanjani ukuthengisa, ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukuzibandakanya, nokuningi. Ngakho-ke, imicimbi imele uhlobo lwe IWest West kubamakethi.
Imicimbi ingumbuthano waminyaka yonke wokuya kwabaningi kubuchwepheshe, kusuka I-DreamForce yeSalesforce inkomfa ye- Umbukiso Womhlaba Wonke Wabathengi (CES). Zithandwa kakhulu kwezentengiso (cabanga IMozCon futhi Okungenayo kwe-Hubspot imibuthano). Imikhiqizo efana nePepsi nePrudential imicimbi yokusingathwa ukuze ixhumane ngokujulile nabathengi futhi ikhiqize ukuqwashisa ngomkhiqizo. Isibonelo, iPrudential's 4.01K “Race for Retirement” iqale njengomcimbi obhekene nabathengi futhi yakhula ngokushesha yaba umkhankaso wokumaketha ochumayo wenkampani ngenxa yempumelelo yayo. Bese kuba nemicimbi efana neNingizimu ngeNingizimu-ntshonalanga (i-SXSW), eletha imikhiqizo, abathengi nabadlali ndawonye.
Uma ungumakethi, kungenzeka ukuthi unesabelomali semicimbi - futhi ngesizathu esihle. Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha wabathengi abanokuhlangenwe nakho okuhle emcimbini bazothambekela kakhulu ekuthengeni imicimbi yanamuhla ingaphezu kokuhlangana nje, noma kunjalo; zingama-shindigs ayinkimbinkimbi anezinhlelo zokumaketha eziyinkimbinkimbi ngokumangalisayo. Abakhangisi bafaka yonke into kusuka ku-Near Field Communications (NFCs) kuya ku-Radio-Frequency Identification (RFIDs), besebenzisa lobu buchwepheshe obunqenqemeni ukulandelela, ukumisa isixuku, nokwenza ngcono imicimbi yabo kuzo zonke izindawo esikhathini sokuphila somcimbi.
Kepha izinkampani zilisabalalisa kanjani igama ngemicimbi yazo? Imicimbi ingashicilelwa kumawebhusayithi ezinkampani, imithombo yezokuxhumana, nge-imeyili, noma kwezinye izinhlobo eziningi. Ngayinye yalezi zitolo inezinzuzo nezingozi zayo, kepha kusazizwa sengathi kukhona okushodayo. Kuthiwani uma kunendawo eyodwa lapho abathengisi bengaya khona ukukhuthaza yonke imicimbi yabo online? Kukhona - kubizwa ngekhalenda lomcimbi.
Lapho uzwa ikhalenda lomcimbi, Cishe ucabanga ngekhalenda yefoni yegridi yezinsuku ezingama-30 elula. Ithula imininingwane nolwazi ngemicimbi ngendlela engajwayelekile bese kufanele udonsele abantu ekhalendeni lakho ukuze ufunde kabanzi ngayo. Kodwa-ke, amakhalenda anamuhla emicimbi exhumanayo angamathuluzi anamandla wokumaketha asiza ukushayela ithrafikhi, ukuba khona nokwazisa ngemicimbi yakho. Faka Okomakhelwane, i-BFF yakho entsha.
Ikhalenda lomcimbi we-Localist liyisitolo esisodwa esisiza abathengisi ukushicilela, ukuphatha nokuphatha imicimbi yabo kalula ku-inthanethi, konke endaweni eyodwa. Okomakhelwane inikeza izici ezintsha, kufaka phakathi:
Amakhasi okufika komuntu ngamunye ngomcimbi ngamunye, indawo, nezinombolo zokukhulisa iqembu futhi uthuthukise i-Search Engine Optimization (SEO).
Ukuhlanganiswa nezinkundla zokuxhumana njengoFacebook noTwitter, okuvumela abalawuli bemicimbi ukuthi balandele izingxoxo zomcimbi wabo futhi bavumele izethameli ukuthi zabelane kalula ngezinhlelo zabo zomcimbi nabangane.
Ukuhlaziywa komcimbi wokugcina emuvas, enika amandla abalawuli ukulandelela abakhona, ukugcina amathebhu emphakathini wezenhlalo, nokukala ukusabela kwezethameli ngaphambi komcimbi.
Ukubeka uphawu okwenziwe ngokwezifiso, ekuvumela ukuthi ufake kalula ukubukeka nomuzwa womkhiqizo wakho, ugcine umkhiqizo wakho uphakathi nendawo nendawo.
I-Powerful API, exhuma nobuchwepheshe bemicimbi eyahlukahlukene ukuhlanganisa ndawonye okuhlangenwe nakho kwakho komcimbi.
I-Localist ixazulula inkinga yokwandisa ukubuya kwakho kumicimbi ngokwakha okuqukethwe komcimbi owenzelwe wena ongasetshenziselwa ukumaketha imicimbi yakho, noma ngabe lokho kungokukhuthaza umphakathi, ukumaketha okuqukethwe, noma esinye isiteshi sokumaketha.
Ngokukhishwa kwamakhasi okufika ngakunye komcimbi ngamunye, indawo, neqembu, i-Localist idala okuqukethwe okunobungane kwe-SEO okungabuyiselwa ukuze kuthengiswe kuziteshi zakho. Usuvele uya emizameni yokwakha konke okuqukethwe okuzodinga ukuthumela umcimbi wakho; kungani uyiyeka ingenzi lutho ekhasini lewebhu lapho ungasebenzisa lolo lwazi olufanayo ukuthola abakhona futhi namakhasimende amasha?
Ubuchwepheshe be-Localist busiza abathengisi ukuthi bayisebenzise kakhulu imicimbi yabo, basebenzise ikhalenda njengomshini wokukhangisa onamandla. Amakhasi ayo e-SEO-friendly, branding eyenziwe ngokwezifiso, kanye ne-back-end analytics ikunikeze amathuluzi owadingayo ukwenza umaki ngemicimbi yakho, yonke ibekwe endaweni eyodwa, ene-interface elula ukuyisebenzisa.
Ukuze ufunde kabanzi futhi uzame i-Localist ngokwakho, vakashela i-Localist.com bese uqala isivivinyo samahhala namuhla.
Qala Isivivinyo Sakho Sasendaweni Samahhala Namuhla
Tags: leziukudayiswa komcimbii-hubspot engenayoinkomfa engenayoumbukiso wabathengi bamazwe omhlaba jikeleleowasendaweniIzingqungquthela Zokumakethamozconkhuthaza imicimbi onlineabasebenzi bokuthengisa abaphuphayoeningizimu ngaseningizimu-ntshonalangaSXSW